Dominikha - ALinks
Ungahamba njani eDenmark?
January 15, 2022 UMaitri Jha Dominikha, hamba
'IDenmark', lilizwe elilungileyo nelilula kubahambi. Eli lizwe lineenduli, amachibi kunye neendawo ezigudle unxweme; inemihlaba emihle enje ngamawa amhlophe aseMons Klint. Into ebaluleke kakhulu ngeDenmark kukuba icocekile
Uyifumana njani i-visa yomsebenzi eDenmark?
January 7, 2022 UAntika Kumari Dominikha, ivisa
IDenmark, ngokusemthethweni ubukumkani baseDenmark, lilizwe laseNordic. I-Denmark eyiyo, eyona yezantsi kakhulu kumazwe aseScandinavia. Kuxhomekeka kuhambo lwakho oluya eDenmark, iintlobo ezahlukeneyo zevisa ziya kusebenza kulo msitho. Nokuba uceba
Zithini iindleko zokuhlala eDenmark? Imali yokuhamba, izindlu kunye nokutya eDenmark.
January 4, 2022 UMaitri Jha Dominikha, imali
Isihloko sokuhlala eDenmark, emva koko kuya kufuneka wazi ezinye izinto ezibalulekileyo malunga nelizwe. Indleko zokuhlala eDenmark zibiza kakhulu. Kwanomgangatho wokuphila uphezulu kakhulu kunakwininzi yamazantsi eYurophu
Yeyiphi eyona bhanki ilungileyo eDenmark?
Disemba 7, 2021 UMaitri Jha Dominikha, imali
IDenmark inecandelo elikhulu lebhanki. Kungenxa yokuba abantu baseDenmark bakhetha ukubeka iiasethi zabo kwiibhanki zasekhaya. Kwakhona, icandelo lebhanki yasekhaya eDenmark liphethe i-87.52% yeasethi iyonke yeasethi. Ukushiya ngasemva kwiibhanki zangaphandle ezibambe kuphela i-12.48%.
Imfundo Yeyabo Bonke, Nazi iIyunivesithi ezi-5 eziPhezulu eDenmark
Novemba 21, 2021 UAntika Kumari Dominikha, isifundo
Imfundo eDenmark inyanzelekile kubantwana abangaphantsi kweminyaka eli-15 okanye eli-16. Kodwa akunyanzelekanga ukuba baye eFolkeskole (“kwisikolo sikarhulumente”). Iminyaka yesikolo ukuya kwiminyaka elishumi elinesihlanu / elishumi elinesithandathu iqhele ukubizwa ngokuba yiFolkeskole ukusukela nanini na
Ufumana njani umsebenzi eDenmark?
Novemba 16, 2021 UAntika Kumari Dominikha, imisebenzi
Ukuba sele unemvume yokusebenza, okanye ungowaseDenmark okanye ummi wase-European Union, ungaya ezantsi ukuze ubone indlela yokufumana umsebenzi eDenmark. Ukuba awunayo imvume yokusebenza, into yokuqala
Ukutyelela eDenmark, jonga lelona Xesha liLungileyo lokutyelela
Juni 9, 2020 UMaitri Jha Dominikha, hamba
Elona xesha lilungileyo lokutyelela iDenmark kukuqala kwehlobo, kunye nehlobo eliqaqambileyo kunye namafu acacileyo. Ungacwangcisa uhambo lwakho ngoJuni. Njengoko iintsuku zinde ngoJuni eDenmark, unokwenza imisebenzi emininzi yangaphandle ngelo xesha
Ezona Zona nkonzo zibalulekileyo kwezempilo eDenmark
Ngamana 17, 2020 UAntika Kumari Dominikha, impilo
Ukhathalelo lwempilo eDenmark lubonelelwa ikakhulu ngoorhulumente bengingqi kunye naphakathi. Unesi, ukhathalelo lwasekhaya, kunye neenkonzo zezempilo luxanduva loomasipala abangama-98. Inkcitho kurhulumente waseDenmark kukhathalelo lwezempilo lumalunga neepesenti ezili-10.4 ze-GDP. Eli nqaku liza